HALDOOR XASUUS MUDAN MAXAMUUD MUUSE XIRSI BOQOR “CADDE”. – Idil News
July 5, 2020 | Fikrad loo baahnaa ayay ahayd qaybinta Bosaso
July 5, 2020 | Video:-Madaxweyne Deni iyo Haweenka Mudug oo kulmay
HALDOOR XASUUS MUDAN MAXAMUUD MUUSE XIRSI BOQOR “CADDE”.
Posted By: Jibril Qoobey February 8, 2019
Cadde Muuse wuxuu ka mid ahaa halyeeyo loo tiriyo waddaniyad Soomaalinimo, waxa uu ku dhashay Bender Bayla 1-dii Julay 1937, wuxuuna Alla ha u naxariistee ku geeriyoodey dalka Imaraadka Carabta Arbaco 8-dii Febaraayo 2017.
Bidix: Gen Cadde Musse Xirsi, iyo Gen Xasan Muuse 1963
1965 wuxuu u dallacay Dhamme, wuxuuna noqday Taliyaha Ururka Horseed oo markaa Xamar fadhiyey.
1967 waxaa loo diray Akademiyaha Sare oo Dagaalka, Dalka Talyaaniga. Wuxuu soo dhammeeyey markii Kacaanku dalka qabsaday isagoo Gaashaanle ah. Waxaa lagu magacaabay Taliyaha Qaybta 21aad ee Beled Weyne isagoo loo dallacsiiyay Gaashaanle Dhexe.
1971 waxaa loo beddeley Muqdisho, Hoggaanka Tababbarrda Xoogga dalka Soomaaliyeed.
1973 waxaa loo diray Akademiyaha Sare ee Frunze, dalka Midowga Soofyeeti, isagoo soo bartay Straateejiyada Guud ee Dagaalka Dawldaha. Wuxuu soo dhammeeyey 1974. Markuu soo noqday waxaa loo magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Sanaag.
Wuxuu ahaa mas’uulkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay Gurmadkii Abaartii Dabadheer, wuxuuna ka bilaabay gobolka in uu dadkii soo cayroobey ku xereeyo Xeryo Gargaar oo dawladdu ku biisho. Waxaa ugu yimid Madaxweyne- Ku- Xigeenkii Ismaaciil Cali Abokor oo markuu ku qancay siyaasaddii General Cadde ku maamulay Abaarta la qaatay kuna dhawaaqay in gobolladii Abaartu ka jirtey sidaas oo kale loo maamulo.
1975 aakhirkeedii markii abaartii hawsheedii la soo gabagabeeyey, waxaa loo beddeley Xamar, isagoo Gurmadkii Abaaraha lagu guddoonsiiyey Billad Qalin ah.
1976 isagoo loo dallacsiiyey Sare Guuto ayaa loo magacaabay Safaardda Soomaalida dalka Shiinaha oo uu ka noqday La-Taliyaha Arrimaha Meleteriga.
1979 waxa loo beddeley Safaaradda Soomaalida ee Ottawa, dalka Kanada, oo uu La-Taliyaha Guud Safaaradda ka noqday.
1981 wuxuu ku biiray ururkii Somali Salvation Democratic Front (SSDF) isagoo ka soo duulay dalka Kanada, wuxuuna noqday Taliyaha Ciidankii SSDF.
Waxaa sir iyo caadba dad u sheegi jireen in ay jireen tira saraakiil sare ah oo meleteri iyo bileys magac leh isugu jirey oo madaxdii Xukuumaddii Kacaanku uga shaki qabeen in ay wax inqilaabaan. Haddey taasi run tahay, Cadde Muuse wuxuu ka mid ahaa saraakiishaas shakiga laga qabey. Sidaas darteed, saraakiishaas waxa loo qaybshey kuwa laga fogeeyo meelaha xasaasiga ah ee ciidammada, kuwa jagooyin rayad ah lagu wareejiyey, kuwa safaarado la geeyo, kuwa xabsi la dhigay iyo kuwa la laayey.
Ugu dambayntii, General Maxamuud Muuse Xirsi Boqor kama dhiman qoyskiisa iyo dadka reer Puntland, sidii uu hore u yiri Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ee wuxuu ka baxay ummadda Soomaalida oo dhan.
Cadde Muuse wuxuu ahaa boqor, janan qaran iyo madaxwene ay u dhan yihiin haybaddii iyo waxgaradnimadii sifooyinkaas laga arki jirey adduunka.